Ubhaliso lwabaSebenzisi boLuntu baseSpeyin | Ezezimali
Ubhaliso lwabaSebenzi boLuntu abaSebenzayo eSpain
Kwilizwe lanamhlanje elinabileyo kuninzi imisebenzi yeshishini okwenziwa ngokuvelisa i- Irejista yabaSebenzisi abaManyeneyo. Kodwa zithini ezo ngxelo? Kwezinye iimeko zenziwa? Kwaye kwenziwa njani ukubonisana ngale misebenzi?
Kwicatshulwa elilandelayo siza kuyiphendula le mibuzo ukuze sicacise kangangoko kunokwenzeka amathandabuzo anokuvela ngokubhekisele kwi Iirejista zabasebenza ngaphakathi.
Masiqale ngokunika impendulo ekhawulezayo kwimibuzo ephambili evelayo malunga nomxholo, kuqala Ngubani oya kuba kwi irejista yemisebenzi yokuzibandakanya ngaphakathi? Impendulo yile: Iinkampani zaseSpain okanye ii-freelancers ezisebenza neYurophu. Umbuzo wesibini uza kuba nini ezi rekhodi ziveliswa? Xa usenza nawuphi na umsebenzi weshishini ngaphandle kweSpain, oku kuthetha ukuba unabaxhasi okanye abathengi ngaphandle kwelizwe.
Into elandelayo yokucacisa ukuba nabani na onomsebenzi wezoqoqosho ngaphandle kwe-Spain uphantsi kokuthobela ngokuqinisekileyo izibophelelo zerhafu. Kukho ukubaluleka kwalo mba, kokubini kwiinkqubo zolawulo ekufuneka zenziwe kwaye kuxanduva lwemali esiya kuthi siyicacise apha ngezantsi.
1 Yintoni kwaye ungayifumana njani i-NIF-VAT
2 Yenza inkqubo yokufumana i-NIF-VAT
3 Amathuba ama-3 xa ukubhaliswa kwabasebenza ngaphakathi koluntu
4 Inkqubo yesibini yolawulo: ukwenziwa kwefom 349
6 Ukubonisana ngokwakho nokubhaliswa kwabasebenza ngaphakathi
Yintoni kwaye ungayifumana njani i-NIF-VAT
Inkqubo esiza kudityaniswa ngayo irejista yabasebenza ngaphakathi koluntu eSpain. Umxholo wesibini esiza kuthetha ngawo uya kuba kukuboniswa kwemodeli 349. Kamva siza kujongana nezihloko zeentlobo zokubonisana abaqhubi ngaphakathi nendlela yokwenza imibuzo enjalo.
Yenza inkqubo yokufumana i-NIF-VAT
Enye ye iimfuno zokuqala ukuze iinkampani okanye abantu sikwazi ukuthenga okanye ukuthengisa iimveliso kunye neenkonzo ezivela kwilizwe elikwiManyano yaseYurophu kukuba ne-NIF-VAT; Okwangoku kubalulekile ukucacisa ukuba i-NIF iyangqinelana ne-DNI yethu isebenzisa u "ES" ekuqaleni, ukucacisa ukuba Umqhubi waseSpain woluntu.
Kufuneka sibonise inkqubo phambi kweCandelo likaNondyebo, esiza kucela ukuba asibhalise ngaphakathi Irejista yabaSebenzisi abaManyeneyo. Ukwenza ubhaliso kuya kusivumela ukuba sibhaliswe njengomntu oziqeshileyo okanye inkampani eza kwenza intengiso okanye ithenge komnye umntu ongaphandle kweSpain, ukuba nje ikwi-European Union.
Indlela esiqala ngayo le nkqubo kukungenisa imodeli 036 (Kufuneka icacisiwe ukuba ayinakuba ngu-037 kuba sifuna ukubhalisela imisebenzi yezoqoqosho ngaphandle kweSpain) nje ukuba sigcwalisile olu xwebhu kufuneka silunike kuNondyebo.
Emva kokungenisa isicelo sobhaliso, uNondyebo uya kusinika impendulo ebhaliweyo, ebonisa ukuba samkelwe okanye cha abaqhubi ngaphakathi. Eyona nto iqhelekileyo kukuba impendulo iyavuma. Nje ukuba ukwamkelwa kwesicelo sethu kuqinisekiswe, siya kuba ngaphakathi Irejista yabaSebenzisi abaManyeneyo.
Kubalulekile ukucacisa, apha ngezantsi, ngawaphi onke amathuba anokubhaliswa kwi- Irejista yabaSebenzisi abaManyeneyo.
3 amathuba xa uku Irejista yabaSebenzisi abaManyeneyo
Into yokuqala enokwenzeka, kwaye enye ebaluleke kakhulu, kukuba ngaphakathi kwe- Inkqubo yeVIES. Le nkqubo yezezimali isinika amandla okulawula abo sinobudlelwane bezorhwebo nabo, ngokwazi ukuba umthengisi wethu okanye umxhasi wethu unakho ukwenza imisebenzi yezoqoqosho phakathi kwamazwe ahlukeneyo.
Olu ncedo luya kusivumela ukuba silawule ngakumbi imisebenzi yethu yezoqoqosho ngaphandle kweSpain, kuba xa sisenza ishishini nabantu abasebenza ngokukhululekileyo okanye iinkampani ezibhaliswe ngaphakathi Inkqubo ye-VIES, uxolelo lwe-VAT lunokwenziwa Kukho kwii-invoyisi zethu. Ukwenza iziphumo zolawulo kunye nezoqoqosho zibe zihle ngakumbi kwaye zilula.
Ithuba lesibini lokuba ukubakho kule registry lisinika ukuqondwa kwee-invoice kubaxumi bethu baseYurophu, ii-invoice ezingazukuhamba ngaphandle kweVAT, isizathu soku kukuba ukuthengisa okungaphakathi koluntu akuhambi neVAT evela eSpain, ngokuchaseneyo Baza kubhaliswa kwi-VAT yelizwe abhalise kulo umthengi.
Oku kungasentla kushwankathelwe kwinto yokuba, ukuba i-invoyisi yethu yeyomthengi okwi Irejista yabaSebenzisi abaManyeneyo, kumthengisi, ukuthengisa kukhululo lwe-VAT
Enye into yokuba ukubhaliswa kule nkqubo kusinika ukukwazi ukufumana ii-invoice ezivela kubanikezeli ngeenkonzo kwi-European Union. Eyona nto iphambili koku kukuba iimveliso ziya kubiza ixabiso eliphantsi ngokusindisa iVAT.
Nanku lo mbuzo ulandelayo unokuvela:Ukuba andibhaliswanga kwinkqubo yeVIES Ungathenga okanye uthengise iimveliso kwi-European Union. Impendulo yeyokuba, ukuba kunokwenzeka, nangona kunjalo, zonke iintshukumo ziya kwenziwa nge-VAT yelizwe elihambelanayo, ke intengiselwano iya kubiza kakhulu.
Inkqubo yesibini yolawulo: ukwenziwa kwefom 349
Umzekelo 349 Yifomathi ekwenziwa ngayo isibhengezo kuko konke ukuthengwa kunye neentengiso ezenziwe ngaphandle kweSpain, kumthengi okanye kumthengisi ngaphakathi kwe-European Union. Kule fomu siya kufumana isishwankathelo semisebenzi yethu yangaphakathi koluntu.
Kubalulekile ukuba uchaze ukuba le fomathi ibaluleke kakhulu kwimbuyekezo yerhafu, kwaye ukuba ukhetha ukungayingenisi le fom, ungasifumana isohlwayo esivela kwilifa. Ukongeza, ukuyiveza kusinika ithuba lokuba sikwazi ukwahlula yonke intengiselwano esinokuyenza kwaye ngale ndlela sinokuthatha izigqibo malunga nenkampani yethu.
Kule fomu uya kufumana konke ukuthengiselana okwenziwe apha ekhaya kunye nezo zenziwe kunye nomthengi okanye umthengisi we-European Union. Kwaye ukugcwalisa kwenza ukuhlawula irhafu kube lula kakhulu.
Into ebaluleke kakhulu ukuba siyigcine engqondweni kukuba sinokuyenza imibuzo ethile kwinkqubo ye-VIES, oku ukuze sibe nolwazi olwaneleyo ukuze sikwazi ukwenza izigqibo ezichanekileyo malunga nenkampani yethu okanye umsebenzi wethu woqoqosho lwengingqi.
Siza kuqala sihlalutye umbuzo wabasebenzi basekuhlaleni eSpain. Ukwenza lo mbuzo, ulwazi ekufuneka silwenzile yi-NIF-VAT yomntu osebenza ngaphakathi. Nje ukuba sibe nalo olu lwazi sinokufikelela kwinkqubo ye-VIES kwaye singene kwi-NIF. Injongo yalo mbuzo kukuba nakho ukuqinisekisa ukuba ubhalisile kwinkqubo. Lo mbuzo uhlala usetyenziswa ziinkampani okanye abantu abazisebenzelayo abavela kwamanye amazwe e-European Union abafuna ukuqinisekisa ukuba umboneleli okanye umthengi ubhalisiwe kule nkqubo.
Omnye umbuzo onokwenziwa yile abaqhubi be-intra-yoluntu abangabo baseSpanish. Ukuze sikwazi ukwenza lo mbuzo, ulwazi olufunekayo yi-NIF-VAT kunye nesatifikethi se-elektroniki, kuya kufuneka sikhethe ikhowudi yelizwe (oonobumba bokuqala be-NIF-VAT)
Kufuneka kuqatshelwe ukuba lo mbuzo wenziwa ngokuthe ngqo kwinkqubo yelizwe apho ikhowudi ingeniswe khona iyahambelana. Nje ukuba kwenziwe umbuzo, isikrini siza kusibonisa umyalezo obonisa ukuba iarhente yerhafu iqinisekisa ukuba i-NIF-VAT ikho okanye ayiveli njenge umqhubi weqela labantu.
Ukwenza lo mbuzo xa ukhetha abathengisi bethu kuluncedo ngakumbi, kuba kusinika izibonelelo zerhafu. Kwaye iyakusivumela ukuba sibe nolawulo olungcono kwimicimbi yethu kunye nabathengi bethu okanye abathengisi kwi-European Union.
Ukubonisana ngokwakho Irejista yabaSebenzisi abaManyeneyo
Ukubonisana kokugqibela esiza kujongana nako kukubonisana ngokwakho, Oko kukuthi, nathi ngokwethu sifuna ukujonga imeko yethu ngaphakathi kwenkqubo yeVIES. Ukuze sikwazi ukwenza olu dliwanondlebe sidinga i-NIF-VAT yethu kunye nesatifikethi se-elektroniki esivela kumfaki-sicelo Lo mbuzo uhlala usenziwa ukwenzela ukubeka esweni imeko yethu ngaphakathi kwenkqubo.
Ngexesha lokwenza lo mbuzo, kufuneka sifake inombolo ye-VAT kwibhokisi eyenzelwe le nto, kwaye umyalezo wokukhutshwa uya kuba lulwazi lwethu apho kuboniswe ukuba iarhente yerhafu inenombolo yethu njengomntu osebenza ngaphakathi.
Olu lwazi lunokusetyenziselwa ukuzibonakalisa njenge-freelancer okanye inkampani ekulungeleyo ukukhupha okanye ukufumana ii-invoice ngaphakathi kwesakhelo serhafu esichaziweyo. Kwaye iyakusivumela ukuba sifikelele kumathuba angcono eshishini
Nangona ulawulo lwee-invoyisi zethu ngaphakathi Irejista yabaSebenzisi abaManyeneyo Ayisiyonto ilula ukuyenza, inyani kukuba kufanelekile ukuhoya ukuze ukwazi ukuqinisekisa izinto ezimbini, ukuthengiselana okulula kunye nabanye abasebenza kwi-European Union, kwaye okwesibini, ukubuyisa irhafu echanekileyo ngokuchasene nonondyebo .
Enye yezindululo ekufanele ukuba siyithathele ingqalelo kukusebenzisa isoftware ekhethekileyo ekufezekiseni ii-invoice, ngale ndlela siya kuba nakho ukunqanda iimpazamo ezinokubakho kwirhafu yethu kwaye iya kusivumela ukuba silawule ubalo-mali lwethu ngendlela elula kakhulu indlela, ukongeza ukubonisa izibonelelo ezingaphezulu ngokusivumela ukuba sigxile ekukhuleni kwenkampani yethu, senze izigqibo ngokusekwe kuhlalutyo lolwazi oluthiwe thaca kwisoftware.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Umgaqo-nkqubo wezemali » Ubhaliso lwabaSebenzi boLuntu abaSebenzayo eSpain
Isigqibo seNkundla ePhakamileyo sichaphazela njani ukubambisa?